Allah’s Mercy (in Burmese Language) – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 12, 2008 December 12, 2008 by kyawkyawoo	Posted in Allah's MercyTagged A towering Burmese Muslim, al Quran, allah, Allah All Merciful most Merciful, Allah's Mercy, Allah's Mercy in Myanmar, အစ္စလမ်, အလ္လာ ၏ မဟာဂရုဏာ နှင်�, ကျော်ကျော်ဦး, burma, burmese muslim minority, Burmese Muslims, expalnation about islam. islam religion, Invitation to all Muslim Minorities, islam, islam in Myanmar, islam. burmese muslim. myanmar muslim, Myanmar Muslim blog
ထာဝရ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာရှင်မြတ်၏ ကောင်းခြီးမင်္ဂလာ နှင့်ငြိမ်းချမ်းမှူများ ဘလော့လာဖတ်သူမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ်သို့ ကျရောက် ပါ စေရန် ဆုမွန်ပြုပါတယ်။
ဒီဘလော့ ကို post အသစ်မတင် ဖြစ်တာရက်လေးဆယ် ကျော်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲက လာဖတ် ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် မြန်မာလို post ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ် ကတော့ အလ္လာ ၏ မဟာဂရုဏာ နှင့်ကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ညီနောင် များ, ဖန်ဆင်းရှင် ကို မယုံကြည် သူများကို လဲ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါ တယ်။
ဖန်ဆင်းရှင် ရဲ့မဟာဂရုဏာ သည် ဤစကြာဝဠာ ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးအပေါ် သို့မပြတ်မစဲ ကျရောက်နေတာ ဒီစကြာဝဠာသက်တမ်း အစမှ အဆုံးအထိပါ။
ကျွန် တော်တို့ကမ္ဘာ ကြီး တခုလုံး ရုတ်တရက် မှောင်မဲ ပြီး အလင်းရောင် မဲ့ အသက်ရှူစရာလေလဲမရှိ အပူရှိန်ကလဲရေဆူမှတ် အ ဖြစ် သို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလား?
အလျား အနံ ဆယ်မိုင်လောက်ရှိတဲ့ ဂြိုယ်ပဲ့တစ် ခု ကမ္ဘာ ကြီးကို ဝင်ဆောင့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကမ္ဘာ နားမှာဒီလို ဂြိုယ်ပဲ့တွေ သန်းနဲ့ချီပြီးဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။ အလ္လာ ရဲ့မဟာကရုဏာ ကြောင့်သာ လူသားတွေအားလုံး အသက်ရှူ ခွင့်ရနေတာ ပါ။
ဆယ်မီနာ တစ်ခုမှာ မျက်စိ အထူးကု ပါရဂူ တစ်ယောက် က တိမ်ခွဲ ရာမှာ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှူကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
“After removing the bandage, and when the patient can see you,…he will tell you that you are God”
သူကတော့ဘာသာမဲ့ မို့ ဒီလိုပြောတာပါ။ မျက်စိကို မြင်အောင်ခွဲ ပေးတဲ့ဆရာဝန်ကို ဒါလောက်ကျေးဇူးတင်ရင် မွေးကတည်း က သေသည်အထိ မပြတ်မစဲအမြင်အာရုံပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင် ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လို ဖော်ပြကြမလဲ။
အသက်ခုနစ်ဆယ်ကျော် အဖိုးအိုတစ်ယောက် ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ် ပြီးဆီးမသွားနိုင် လို့မချိမဆန့်ဝေဒနာနဲ့ဆေးရုံရောက်လာပါတယ်။ဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေက ဆီးပိုက်ထဲ့ပေးလိုက်တော့ ဆီး သွားလို့ရပြီး ဝေဒနာယူပြစ် သလို ပျောတ် သွားပါတယ်။ အ ချိန်တန် တော့ဆေးရုံကဆင်းဖို့ကုသစရိပ် Bill ရတော့အဖိုးက ငိုရှာပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက သူတို့ယူတဲ့ဆေးဖိုး များရင်လျှော့ ယူပါ့မယ် အဖိုး မငိုပါနဲ့လို့တောင်းပန်ကြတော့ အဖိုကသူငိုတာဆေးဖိုး ကြောင့်မဟုတ်ပါ အရှင်မြတ်ကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးနေ့စဉ် ဆီးသွားခဲ့တဲ့ အတွက်ဘယ်တုန်းကမှ Bill မပို့ခဲ့လို့ငိုရတာပါလို့ ဖြေတယ်။
အလ္လာရဲ့ တုနှိုင်းမဲ့ဂရုဏာကျေးဇူး ကိုမပြတ်သိနိုင်ကြပါစေ။
5 thoughts on “Allah’s Mercy (in Burmese Language)”
အလ္လာ ၏ မဟာဂရုဏာ နှင့်ကျေးဇူး Very nice post. Thanks for add my blog.
ကျွန်တော်မရှင်းလို့တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဗုံးတွေ ဗုံးပေါလအောခွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သတင်းမှာဖတ်လိုက်ရင် ဗုံးခွဲသူတွေတော်တော်များများဟာ အစ္စလာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဗုံးခွဲခါနီးတောင် ကြွေးကျော်ပါ။ အလ္လာကောင်းချီးပေးပါစေလို့။ ပြီးတော့ သူတို့ကို အာဇာနည်လို့ခေါ်သတဲ့။သေတဲ့သူတွေထဲမှာ အလ္လာအရှင်ကိုနစ်နစ်ကာကာယုံတဲ့သူတွေလဲပါတယ်။ ပြီးတော့ အီရတ်မှာဆိုရင် ဗလီကျောင်းမှာခွဲခွဲတာပါ။ အလ္လာရှင်မြတ်က ဒီလိုလုပ်တာကိုခွင့်ပြုပါသလား။ သူတို့ကို အလ္လာက ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတာပါ။ အဲဒီလူတွေကို အလ္လာရှင်က ဘာကြောင့် ကြည့်နေတာပါလဲ။ အလ္လာရှင်ကအရေးမယူပဲနဲ့ အစိုးရတွေက ဖမ်းပြီး ထောင်ချ သေဒဏ်ပေးလုပ်နေတာလဲ။ တကယ်လို့ အဲဒီသူတွေက အလ္လာဘုရားသခင်တွက်လုပ်တယ်လို့ ပြောရင် အစ္စလာန်ဘာသာဝင်အနေနဲ့ လက်ခံနိုင်ပါသလား။ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား
ဒါပေမဲ့ဘာသာ သာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ မတရားသောစစ်ကိုခုခံတော်လှန်ဖို့
လဲ စနစ်တကျသင်ကြားပြထားပါတယ်။အခုမေးခွန်းမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ မေးခွန်းကို
၃။ဗုံးခွဲအသေခံသူများမှာအလွန်ဆင်းရဲမွဲတေပြီး ခေတ်ပညာ ဘာသာရေးပြီညာအသိ “ဝ”လုံးအဆင့်သာရှိပြီး
အာဖဂန်နဲ့ပါကစတန်မှာနေ့စဉ် ဒရုံးလို့ခေါ်တဲ့ UAV` တွေ အပါချီရဟတ်ယဉ်တွေပေါ်ကစစ်သားတွေအပြစ်မဲ့အရပ်သားရာနဲ့
ချီပြီး သူတို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံရွာကျိုအကြားအထိ လိုက်ပြီးသတ်နေတာသိပါသလား။?
သူတို့သေနတ်မောင်းမဖြုတ်ခင် Fxxxလို့ဆဲရေးတိုင်းတာပြီးမှ ရက်ရက်စက်စက်သတ်တာကြည့်ဖူးပါသလား?
၁. ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်က အလ္လာဟ်ရှင် ဘယ်မှာ နေပါသနည်း? ၂. အလ္လာဟ်ရှင် ကို မည်သူဖန်ဆင်း ခဲ့သနည်း? အလ္လာဟ်ရှင် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် အလ္လာဟ်ရှင်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို ဖော်ပြပါ။
အလ္လာအရှင်မြတ် ကို သိလိုလျှင်မူရင်းအာရဘီ (အာရပ်)ဘာသာအသုံးနှုန်း
အဂ်လိပ် ဘာသာ အရ God ခေါ်ဆိုသော မြန်မာဘာသာအရ
ဘုရားဟုခေါ်ဆိုသောသဘော နှင့် အလ္လာ၏ သဘောသဘာဝမတူကြောင်း
Allah =/= God (အလ္လာကို God ဟု တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်၍မရပါ)
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကအခုလိုရှင်းရှင်းလေး ဖြေပြထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။